Sida Loo Soo Kabsado Sawirada La Tiray Iphone-ka (Adoo Aan La Isticmaalin PC) | Forum Mobile
Sida looga soo kabsado sawirada la tirtiray iPhone (iyadoon la isticmaalin PC)
Daniel Terrasa | 06/05/2022 21:00 | Mac, Nidaamyada hawlgalka
Ma si lama filaan ah ayaad u luntay ama tirtirtay sawiro on your iPhone? Ha argagixin: waxaa jira xalal. Maqaalkan waxaan ku arki doonaa waxa lagu samayn karo soo kabsado sawiro iPhone tirtiray oo aan PC. Taasi waa, si sahlan oo toos ah oo ka timid qalab isku mid ah.
Dhammaan dadka isticmaala iPhone-ku waxay isticmaalaan kamarada taleefankooda maalin kasta si ay u qabtaan oo ay u badbaadiyaan dhammaan noocyada sawirada. Natiijo ahaan, waxay ku dhamaanayaan kaydinta qalabkaaga kaydka sawirada iyo xusuusta. Luminta iyaga waxay noqon kartaa hawl dhab ah. Mararka qaarkoodna xitaa masiibo.
Sidoo kale eeg: Sida loo soo ceshado sawirada la tirtiray ee WhatsApp
Sida aad u badan tahay inaad horeba u ogeyd, aaladaha Apple waxay u habeyn karaan xogtooda siyaabo kala duwan. Tani, kiiska gacanta, waa faa'iido weyn, maadaama ay na siiso habab kala duwan soo kabsado sawiro iyo muuqaalada lumay. Hoos ayaan ku eegeynaa iyaga:
1 5 hababka soo kabsado la tirtiray photos iPhone
1.1 Hubi galka dhawaan la tirtiray ee iPhone
1.2 Ka hel tirtiridda aan la wada socon aaladaha kale
1.3 Ku noqo kaabta iTunes
1.4 Dib u eeg fariimaha si aad u aragto lifaaqyada
1.5 Isticmaal iCloud Backup
5 hababka soo kabsado la tirtiray photos iPhone
Waxaa jira ugu yaraan todoba siyaabood oo aad naftaada uga badbaadiso xaaladdan foosha xun oo aad ka soo kabsato sawirada la tirtiray ee iPhone-kaaga. Iyadoo ku xiran kiiskaaga gaarka ah, waxaad isku dayi kartaa hal ama hab kale ilaa aad xal u hesho:
Hubi galka dhawaan la tirtiray ee iPhone
Haddii sawirada la tirtiray dhawaan, tani waa habka ugu horreeya ee aad isku daydo. Waxay dhacdaa marar badan in inta aan maamuleyno faylasha taleefankayaga, aan si qalad ah u tirtirno sawir. Sawiradan waxay si toos ah ugu dhamaan doonaan galka "Dhawaan la tirtiray" (Isbaanish, "dhawaan la tirtiray"). Waxay ku sugnaan doonaan halkaas, iyagoo diyaar u ah in la badbaadiyo, 30 maalmood kadib markii la tirtiray.
Waa kuwan tillaabooyinka ay tahay inaan raacno si aan uga soo kabsano.
Marka hore, waxaan furaynaa app sawir qalabkayaga.
Kadibna hoos ayaan u rog-rogeynaa ilaa aan ka helno galka "Albamado kale". Gudaha dhexdiisa, waxaan ku dooraneynaa gal-kii aan horey u tixraacnay: "Dhawaan la tirtiray" Haddii 30-kan maalmood ee nimcada aan la dhaafin, faylka aan rabno inaan soo ceshano ayaa laga heli doonaa galkaas.
Si aad u soo kabsato, si fudud guji faylka oo guji ikhtiyaarka "Soo kabasho", oo ku yaal dhanka midig ee hoose ee shaashadda iPhone.
Haddii sawirka ama sawirada aan rabno inaan soo kabsano aysan ku jirin galkan sababtoo ah muddada 30-ka maalmood ah ayaa horay u dhaaftay, isku day mid ka mid ah hababka soo socda:
Ka hel tirtiridda aan la wada socon aaladaha kale
Tani waxay noqon kartaa beddel aad wax ku ool ah haddii ay dhacdo in, marka lagu daro iPhone-ka, waxaan sidoo kale haysannaa qalab kale oo ku xiran akoonnadayada. iCloud. Waxaan tixraacaynaa iPads, iPod Touch aaladaha, MacBooks, kumbuyuutarrada Windows ee leh iTunes, iwm.
Intaa waxaa dheer, waxaan u baahan doonaa in la rakibo app Maktabada Sawirada iCloud, kaas oo mar horeba si caadi ah ugu yimid noocyadii ugu dambeeyay ee iPhone.
Waa in la ogaadaa in Habkani wuxuu shaqayn doonaa oo kaliya haddii aan tirtiray sawirada halka iPhone-ka aanu lahayn xidhiidh xog, ama ku jiray hab diyaaradeed. Taasi waa furaha: sawirada waa la tirtiray, laakiin aaladaha kale ee ku xiran weli ma garanayaan. Waxa aad u baahan tahay in la sameeyo markaas waa in ay sii iPhone offline oo ay isticmaalaan qalab kale oo ku xiran in uu ka soo kabsado content lumay.
Ku noqo kaabta iTunes
Haddii labadii hab ee hore ay shaqayn waayeen, kani waa kan soo socda ee ay tahay in aan isku dayno. Haddii aan isticmaalno software-ka Apple iTunes, kaydka qalabkayaga ayaa halkaas lagu abuurayaa mar kasta oo isku xidhiddu dhacdo.
Habka ayaa u shaqeeya, inkastoo ay tahay inaad tixgeliso in, iyo waxyaabo kale, ma arki kartid faahfaahinta kaydka, ama soo kabsado sawirada si gooni gooni ah. Waa kuwan tillaabooyinka la raacayo:
Marka hore waa inaad ku xidhi iPhone-keena kombiyuutarka adoo adeegsanaya fiilo USB ah.
ka dib waanu furaynaa iTunes oo guji batoonka aaladda, ee ku yaal geeska bidix ee sare.
Marka xigta waa inaad doorataa "Soo celinta kaabta".
Si loo dhammeeyo, waxaanu dooranaa kaydka meesha sawirada aan rabno inaan ka soo kabsano.
Dib u eeg fariimaha si aad u aragto lifaaqyada
Kahor intaadan sii wadin xalalka kale, tijaabi midkan: Sawirada aan raadineyno oo aynaan soo kaban karin waxay u badan tahay in la diray ama la helay. iyada oo loo marayo codsi, sida iMessage ama WhatsApp. Hadday sidaas tahay, waxaa hubaal ah in lagu soo ceshan karo iyadoo la isticmaalayo xogta codsiga.
Isticmaal iCloud Backup
Tani waxay kuu noqon kartaa nolol dhab ah haddii habab hore ay ku guuldareysteen. Sida cad, waa lagama maarmaan in la haysto a gurmad photos iPhone in iCloud. Haddii aad sameyso, waxaad leedahay nasiib, sababtoo ah habka soo kabashada ma fududayn karto:
In iCloud, waxaan tagnaa "Dejinta» oo dooro ikhtiyaarka «Guud ahaan".
Ka dib waxaan dooran "Reset" doorashada oo taabo "Nadiifi nuxurka iyo dejinta».
Marka habka uu dhamaado, waxaan shid our iPhone.
Marka xigta, waxaan raacnaa talaabooyinka qaabeynta.
Talaabada ugu dambeysa waa inaad doorataa ikhtiyaarka «Ku soo celi iCloud Backup".
Ilaa hadda liiska xalalka, kaas oo shaqayn doona inta badan kiisaska. Haddii kale, ha quusan, maadaama ay weli jiraan siyaabo lagu soo kabsado photos lumay iyo iPhone. Qaarkood waxay ku lug leeyihiin isticmaalka abka qaarkood ee lacag bixinta ah. Waxaan kaga hadli doonaa qoraal kale.
Wadada buuxda ee maqaalka: Golaha Moobaylka » Nidaamyada hawlgalka » Sida looga soo kabsado sawirada la tirtiray iPhone (iyadoon la isticmaalin PC)
Sida looga saaro spamka WhatsApp
Sida loo beddelo midabka asalka galka Windows